zawgyi-keyboard-0.3.0 will be released with new features – box02's little blog
August 3, 2009 by box02
zawgyi-keyboard-0.3.0 will be released with new features
ကျနော် ဒီ features လေးတွေကိုစိတ်ကူးထားတာကြာပါပြီ၊ အချိန်မရခဲ့တာရယ်ကြောင့်ပါ။ ခုတော့ အခြေအနေကဖန်လာပါပြီး၊ ကိုစိုးမင်းက ဇော်ဂျီဖွန့်အသစ်ကို new features တွေနဲ့ စပြီး introduce လာခဲ့ရာ ကျနော်တို့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ဇော်ဂျီဖွန့်ဟာလဲ အင်မတန်မှ ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို nice features တွေရှိတဲ့ ဇော်ဂျီဖွန့်အသစ်နဲ့အတူ Linux/Unix zawgyi_keyboard installer ကလဲ new features တွေနဲ့ စတင် release လိုက်ပါတယ်။ ဒီ zawgyi_keyboard.py module က Python Programming Language နဲ့ရေးသားထားပြီး ပါဝင်တဲ့ functions တွေကတော့ ..
တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Install, remove functions က မိမိရဲ့ system ဟာ Linux လား FreeBSD လားကို အလိုလျှောက် detect လုပ်ပြီးတော့ သင့်တော်ရာ directories ရှာဖွေပြီး font & xkeyboard ကို install & remove လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကလို install, uninstall, install_freebsd, uninstall_freebsd scripts တွေကို ခွဲသုံးစရာမလိုတော့ပါဘူး။ နောက်ပြီး font upgrade feature ကလဲ မိမိ အသစ် download လုပ်ထားတဲ့ font path (font directory) ကိုဖော်ပြပေးရုံနဲ့ ဒီ program က ဇော်ဂျီဖွန့်ကို အဲဒီဖော်ပြပါ directory မှာရှာပြီး system ထဲမှာ installed လုပ်ပြီးသားဖွန့်နဲ့ ခုခင်ဗျားအသစ်သွင်းချင်တဲ့ ဇော်ဂျီဖွန့်ကို ပြန်ပြီးဖော်ပြပေးမှာပါ။ အကယ်၍ user က upgrade ကိုဆက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီ program ကဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။
layout help ကတော့ short guide လေးပါပဲ၊ Linux system မှာသုံးတဲ့ GUI keyboard preferences program ကိုဖွင့်သုံးဖို့နဲ့ keyboard indicator ကို panel ပေါ်မှာ ဘယ်လို add ရတယ်ဆိုတဲ့ text base short guide လေးပါ။
နောက်တစ်ခုက ဒီ python script လေးဟာ GNU GPLv3 License နဲ့ release လုပ်တာမို့ open source လဲဖြစ် Freedom to use, learn, edit, modify, hack လဲဖြစ်တဲ့အတွက် လေ့လာသူများအတွက်လဲ တစုံတရာအကျိုးအမြတ်ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကျဿဉ်းချုံးပြောရရင်တော့ ခုထွက်မယ့် zawgyi-keybaord-0.3.0 release မှာ zawgyi_keyboard.py script နဲ့အတူ ကိုစိုးမင်းရဲ့လက်ရာ ရင်ခုန်စရာ ဇော်ဂျီဖွန့်အသစ်ရဲ့ new features တွေနဲ့အတူထွက်ရှိတော့မှာမို့ users များအတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းလေး ပေးအပ်ပါတယ်ဗျား ..
ခုလောလောဆယ် testing လုပ်နေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီ ၁ရက် ၂ရက်အတွင်း ထွက်လာမှာပါ။
ခု cygwin ပေါ်မှာ testing လုပ်ထားတာလေးကို screenshots ထားတဲ့အတွက် နမူနာလေးတော့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
short guide for layout
installing zawgyi-keyboard package
zawgyi font upgrading
uninstall package and quiting the program
အကယ်၍ users များမှာ idea အသစ်လေးတွေရှိမယ်ဆိုရင် ကျနော့်ကိုတင်ပြနိုင်ပါတယ်၊ release ထုတ်ပြီးတဲ့အခါ errors တွေ bugs တွေတွေ့တယ်ဆိုရင်လဲ reports/pitches တွေပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ..
Package release soon!!
This entry was posted in Linux, Prgramming, Software, Testing, Unix, Zawgyi and tagged Linux, Package, Python, release, Unix, Zawgyi. Bookmark the permalink.
← How to share files using samba on Debian 5
zawgyi-keyboard-0.3.0 release out →